'သရုပ်ဆောင် မလုပ်ဖြစ်တာကြာလို့ အခုရိုက်နေတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်ရတာကို ပထမဆုံးဇာတ်ကားြ?? - Yangon Media Group
‘သရုပ်ဆောင် မလုပ်ဖြစ်တာကြာလို့ အခုရိုက်နေတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်ရတာကို ပထမဆုံးဇာတ်ကားြ??
”ကိုယ်တိုင်လည်း အခြေခံလူတန်းစား ဘဝကပဲ ဖြတ်သန်းလာတယ်၊ အခုချိန်ထိလည်း အခြေ ခံလူတန်းစား အငွေ့အသက်တွေ ကိုယ့်မှာရှိနေသေးတာကြောင့် အ ဆိုတော် ကိုချစ်မင်းရဲ့ ”လက်ထဲက အိမ်မက်”ဆိုတဲ့ အခြေခံလူတန်း စားတွေအတွက်ရေးထားတဲ့ သီချင်း လေးမှာ သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သွားတာ ပါ”လို့ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် ကြက်ဖက ပြောပါတယ်။
”ကျွန်တော်ကိုချစ်မင်းရဲ့ ‘လက်ထဲကအိမ်မက်’ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးထဲ မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တာက တော့ ကိုချစ်မင်းနဲ့က ခင်တာက တော့ကြာပါပြီ၊ သူက အဲဒီသီချင်း လေးကို ကျွန်တော့်ကိုဖွင့်ပြပါတယ်။ သီချင်းလေးကို နားထောင် ကြည့်ပြီးတော့ သီချင်းအကြောင်း အရာလေးကလည်း လက်ရှိရုံးဝန် ထမ်းလူငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ လစာ၊ နောက် မိသားစုအခက်အခဲ လေးတွေနဲ့ လူငယ်တစ်ယောက် ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေး တွေကို သီဆိုထားတာဆိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း သီချင်း အကြောင်းအရာကို အရမ်းကြိုက် ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း လူ လတ်တန်းစားဆိုပေမယ့် အခြေခံ လူတန်းစားဘဝကနေပဲ ဖြတ်သန်း ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်ထိလည်း အခြေခံလူတန်းစားအငွေ့အသက် တွေ ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတုန်းပါ ပဲ။ ဒီသီချင်းလေးက အခြေခံ လူ တန်းစားတစ်ရပ်ရဲ့အကြောင်း လေးတွေကို ရေးဖွဲ့ထားတယ်၊ နောက် ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ လည်း တိုက်ဆိုင်နေတာနဲ့ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တာပါ။ သီချင်း လေးက လူငယ်တွေအတွက် အ ရမ်းကို ဖြေသိမ့်စရာဖြစ်မှာပါ”လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ကြက်ဖက နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ¤င်း၏တစ်ကိုယ်တော် အခွေဖြစ်တဲ့ ”တစ်ယောက်တည်း တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲ” အခွေကိုထွက် ရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ဒါရိုက်တာ အောင်မြတ် ရိုက်ကူးပုံဖော်နေ သော ”သန်းခေါင်ယံ(Midnight)” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သရုပ် ဆောင်နေကာ သီချင်းရေးသားမှု အပိုင်းများကိုလည်း ယခုလက်ရှိ အချိန်တွင် ရပ်နားထားပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် သီချင်းများပြန်လည် ရေးသားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိ ရပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ၎င်းက သရုပ် ဆောင်ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဇာတ် ကားရိုက်ကူးမှုအခြေအနေများ နှင့် ယခုဇာတ်ကားတွင်ပြန်လည် သရုပ်ဆောင်ရခြင်းမှာ မိမိအတွက် အသစ်အဆန်းပြန်ဖြစ်စေကြောင်း ကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
”၂ဝ၁၇ တစ်နှစ်လုံးက တော့ ကျွန်တော်ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၈ နှစ်ဝက် လောက်အထိလည်း ရိုက်ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်ပါဝင်ရိုက်ကူး ထားတဲ့ တချို့သော ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေက ”လာလာကြည့်” Mobile App မှာ တင်ထားတာတွေ လည်းရှိတယ်၊ နောက် Sky Net ရုပ်သံလိုင်းကနေ ပြတာမျိုးလည်းရှိပါ တယ်။ အဲဒါတွေက တော့ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် နဲ့ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ကြား မှာ ရိုက်တာတွေပါ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကတော့ မတင်ဖြစ်သေးတာတွေ များပါတယ်။ ရိုက်ထားတာတွေတော့ ရှိပါ တယ်။ ဘာကြောင့် ဒီနောက်ပိုင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ မရိုက်ဖြစ် တာလည်းဆိုတော့ ကျွန်တော့်အ ခွေကထွက်ဖို့ နီးလာတော့ ဇာတ် ကားတွေ မရိုက်ဖြစ်တော့တာပါ။ ပြောရရင် အခုရိုက်ကူးနေတဲ့ ”သန်းခေါင်ယံ”ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကား လေးက ကျွန်တော့်အတွက် ပထမ ဆုံးပြန်ရိုက်တဲ့ဇာတ်ကားလိုဖြစ်နေ ပါတယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ဆန်းစစ်မှု တစ်နှစ် ထပ်မံ သက်တမ်းတိ
နေပြည်တော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဝန်ထမ်းများအတွက် အထူးရထားပြေးဆွဲပေးမည်
ဘားရက် အိုဘားမား နိုင်ငံရေးပွဲခင်းထဲသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အာမခံဝန်ဆောင်မှုအကြောင်း သိရှိသူ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီး လူဦးရေနှစ်သန်းခန့်သာ အာမခံထားရှိ
သင်္ကြန်ကာလ မြို့ဝင်/ ထွက်နေရာများနှင့် အချက်အချာကျသော နေရာများတွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော လက်နက်??
အမေရိကန်နှင့် မဟာမိတ်တို့ဗုံးကြဲ၍ ဆီးရီးယားအရှေ့ပိုင်းတွင် ၁၁ ဦး သေဆုံး